Thina, bantu baseNingizimu Afrika,Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula; Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu; Sihlonipha labo abasebenzela ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi Sikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba singafani. Thina, bantu baseNingizimu Afrika,Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula; Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu; Sihlonipha labo abasebenzela ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi Sikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba singafani. Thina, bantu baseNingizimu Afrika,Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula; Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu; Sihlonipha labo abasebenzela ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi Sikholelwa ekutheni iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba singafani.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zulu_language&oldid=982875890"